Shina Nipaoka ho an'ny mpanamboatra sy mpamatsy maro samihafa | Dingxing
HSS (Haingam-pandeha haingam-pandeha) manana hamafin'ny haavo, fanoherana fanoherana ary fanoherana ny hafanana. Fahombiazana amin'ny fomba tsara, tanjaka tsara sy hasiana. Ny vy haingam-pandeha misy kôbalta dia manana hamafisana avo lenta. Tsy hahavery ny hamafin'izy ireo tamin'ny 1000 ℃.
Famolavolana kofehy miaraka amina endrika manokana, araraoty ny fihinanan-kanina, ny kofehy manify ary ny savaivony
Famindrana puce tsara kokoa
Misoroka ny fanakanana ny puce
Hatsarao ny kalitaon'ny kofehy
Fampiharana ho an'ny fampiharana malalaka, jamba ary amin'ny alàlan'ny lavaka.
Izy io dia mety amin'ny fanodinana vy vy ambany, vy mahery karbaona, vy firaka, varahina, aliminioma, firaka magnesium ary fitaovana hafa
CVD (Fametrahana setroka etona simika)
-Amin'ny fonosana CVD-teknika mety amin'ny fanoherana amin'ny akanjo miaraka amin'ny sakafo avo lenta sy salantsalany ho an'ny fampiharana haingam-pandeha avo.
Famonoana PVD (Deposition etona ara-batana)
-Miaraka amin'ny fantsom-teknika PVD mety ho an'ny fampiharana fanapahana sakafo ambany izay ilaina ny hamafin'ny fanapahana avo lenta.Suit for application with low to inter Mediate feed feed.
ara-nofo Carbon vy S45C
Paramètre fanapahana Fametahana ny 20mm, VC 10m / min
Coolant Fangatsiahana solika
Famaranana Speed ​​Leopard vokatra dia mety ho marin-toerana, mahomby ary haingam-pandeha fanodinana.Speed ​​Leopard Total manaparitaka 204 Holes. Orinasa iray mitendry 159 Holes. Ny fiainana fanodinana ny toe-javatra fanodinana mitovy amin'ny orinasa A dia nitombo mihoatra ny 28%.
Paramètre fanapahana Fametahana ny 25mm lalina, Vc 10m / min
Coolant Mety levona ny rano
Famaranana Speed ​​Leopard Total nipaipaika 216 Holes. Orinasa totalin'ny fanoratana 99 Holes. Orinasa iray mitendry 159 Holes. Ny fiainana fanodinana mitovy amin'ny fepetra fanodinana noho ny orinasa A dia nitombo mihoatra ny 110%, raha ny orinasa B dia nitombo mihoatra ny 23%. Ny vokatra leopard dia mety ho fanodinana azo antoka, mahomby ary haingam-pandeha.
Ny fitaovana dia be mpampiasa amin'ny famolavolana bobongolo, ny indostrian'ny fiara, ny angovo herinaratra, ny fitaovana ara-pitsaboana ary ny toy izany. Ampiasaina amin'ny fizotry ny fikitihana izany. Azo ampiharina amin'ny famokarana vy be, vy vy, vy tsy misy fangarony, alloys varahina, aliminioma Alloys, Titanium Alloys, Heat Resistant Alloys. Ampiharo amin'ny milina CNC.
Ny mpanjifa tsirairay dia hankafy ny serivisy matihanina Speed ​​Leopard sy serivisy ampiana lanja
-Torohevitra momba ny vokatra sy ny masontsivana
-Fampiofanana Teknolojia fanapahana
-Fandinihana drafitra fanatsarana ny fihenan'ny vidiny sy ny fahombiazany
-Ny fanaraha-maso ny sata mifehy
-Fikojakojana ny rindrina
Teo aloha: Kitapo ho an'ny vy tsy misy fangarony